Ipolitiki Archives - Bayede News
Ezamabhizinisi	Amabhizini amakhulu	Izeluleko	Ipolitiki Yamaqembu	Ipolitiki Yamazwe	Ipolitiki yomnotho	Amandla Omnotho	Izelukeko ngomnotho	Izeluleko ngomnotho	Izimakethe	IziShayamthetho	Uhulumeni weSifundazwe	Umlando Wepolitiki
I-USA ingena ngenxeba le-Ukraine ukuguqula isimomazwe entshonalanga
Uma kusuka uthuli e-Ukraine ngesikhathi iRussia ingena ngebhuzu kuleliya lizwe iyodwa into okwabe kungeke kuphikiswane…
Ukugagaza ukuphuma inxiwa sekwaba yisisho NamaKhomanisi kawasolwe angagcini ngokuba nezikhundla Akulona ihaba ukuthi umlando womzabalazo…...
Mkhulu umonakalo owenziwe ngumgolo kuzimiso zomzabalazo
Kuleli sonto ngesikhathi loyo onguMehluleli Omkhulu kuleli kanye noSihlalo weKhomishini ebiphenya ngezinsolo zokugwamandwa kwamandla ombuso…...
Umgoga ayewucuphele abanye eqenjini usungadla yena Umphumela wukuhoxa ezweni naseqenjini Iqembu elibusayo eNingizimu Afrika i-African…...
Umbiko ongamakhasi angama-24 uveza isithombe somholi olihlongandlebe Kupolitki kukhona amakhono kanye nezigameko ezinconywayo kosopolitiki. Isibonelo…...
Ukubuyisana kungasho lukhulu emlandweni. Ipolitiki yakusasa ikhomba ukuthi bayadingana Ungomunye wamalungu okuqala namadala eqembu elibusayo…...
Inkulumo ebhekiswe esizweni inikeza ithemba
Enkulumweni engobume besizwe eyethulwe nguMengameli uCyril Ramaphosa izolo bekulukhuni satshe ukuqagula ukuthi yimaphi amaphuzu obekumele…...
IsiZulu sithi kayihlabi ngakumisa. Yile mpendulo oyithola usaya noma usubuya ukuyokhuluma nalo mholi nesikhuphekhuphe somzabalazo…...
UNgqongqoshe Wezemfundo Ephakeme uDkt uBlade Nzimande usenxuse bonke abantu abasezikhungweni zemfundo ephakeme ukuthi bagome ukuze…...
Abantu balulekwa ngokuthi baqale ukonga zisuka futhi bayinyuse nemali abayongayo nyangazonke
Ividiyo esabalele ezinkundleni zokuxhumana ikhombisa onogada benyuvesi bematasa. Nakuba isimo sesithule kuleli lizwe elibuswa yiNgwenyama kodwa zisekhona iziqubu ezibikwayo zodlame nokuhlaselwa kwabantu ababhikishayo ngamaphoyisa.
AmaNdiya amaningi aseThekwini. Abe-ANC, Inkatha neDA benza noma yini ukuwaheha
Ubhongoza uyaziphungela nokho amanzi asengene endlini isishiphi sisabalele
UDe Villiers ukhankasela ukuba yiMeya ngaphansi kukamasipala waseKapa owaziwa ngeDrankenstein.
Ngokwezibalo, i-IFP ingeyesine ngobukhulu eNingizimu Afrika ngokwama qembu. Kodwa ngokuba nomthelela singabesithathu ngobukhulu, ngoba singelinye lama qembu amathathu okuyiwona alawulayo.
Ngesikhathi lusondela usuku lokhetho kubukeka zanda izingxabano mayelana nohlu lwabazomela uKhongolose.
Kulokhu uzwa amanzi ngobhoko ukuze angene esazi ukuthi kuyoba njani
Kwizinkulumo zabeNFP nayo i-ANC kusobala ukuthi iNdlovu bahlela ukuyikaka, bayiginge baphathe iZDM nokungenza iphupho likaMagwaza Msibi lifezeke ngisho esengasekho.
Kubukeka kusazozwela kumaqembu epolitiki akuleli uma kufika kwezezimali. Lokhu kulandela ukuphasiswa komthetho odalula ukuxhaswa kwamaqembu…...
Ezika Magwaza-Msibi seziphakathi: Kulokhu i-NFP isilubhalisele ukhetho ngesikhathi
Umbuzo uthi ngabe umlingo womholi uzokwazi ukubuyisa izinduku nesithunzi seqembu?
Usola iNjeje ngokunyekefulela uNdunankulu
Engxoxweni nelaboHlanga, uMabaso uthe bayayihlonipha imibono yeNjeje kodwa noma iyintimbothi nje kwesinye isikhathi.
Udlambedlu nokuzitapela kumabhizinisi okusanda kwenzeka esifundazweni sakwaZulu-Natal kube nomthelela omubi kakhulu kumabhizinisi kanye nezakhiwo ezixhaswe…...
AbeSIU banike uRamaphosa abanye abangakubiza ngesikhali noma umjovo odabeni lukaMkhize